Gentoo: Gini mere m jiri chiko ihe nkem? | NwetaLeta | ChrisADR | Site na Linux
Ọfọn, nyere nnukwu nnabata nke ọkwa m gara aga, abịara m ịgwa gị ntakịrị ihe gbasara nkesa m kachasị amasị m, Gentoo Linux. M na-ekwe nkwa na post a ga-enwe ozi na-atọ ụtọ nke ga - enyere gị aka ịghọta ntakịrị ihe banyere akụkọ ifo na - ebute nke egwu chịkọtara nke ngwanrọ. M na-ekwe nkwa na ozi a ga-aba uru maka ntuziaka ntuziaka Linux ọzọ nke ga-esote ~ 20 nzọụkwụ (agụghị m ha nke ọma, mana echere m na ha pere mpe). Na-ebughi n'ihu, ka anyị bido:
1 Kedu ihe na-achịkọta?
2 Usoro owuwu:
3 Anwansi nke ./configure:
4 Nweta obi ụtọ na Gentoo:
5 Final echiche:
Kedu ihe na-achịkọta?
Ọ bụ usoro ihe omume (nke a na-akpọkarị compiler) iji gbanwee koodu edere na asụsụ mmadụ (faịlụ C, C ++, wdg) gaa na koodu nke enwere ike ịghọta igwe (koodu ọnụọgụ abụọ). Ka anyị lee ihe atụ na-esonụ:
Nhazi onwe ya, Christopher Díaz Riveros
Nke a bụ obere mmemme C anyị (ọ bụrụ na ịchọrọ nkuzi C ndị ọzọ ma emechaa, m ga-enwe ọ happyụ igosi gị ntakịrị ihe m mụtara n'oge a) Ugbu a, ka anyị hụ ihe mmepụta dị ka mgbe ị chịkọtara.
Nhazi nke onwe ya, Chrirstopher Díaz Riveros
Mara mma, ọ bụghị ya? Nke a bụ ihe igwe anyị ghọtara iji dee obere "Ndewo" na ọdụ anyị oge ọ bụla emere mmemme ahụ.
Dị ka ọ na-abaghị uru ịnwe mmemme na-ebipụta mfe "Ndewo" na ihuenyo ahụ, dịka faịlụ .c na .h bara ụba na ọrụ (dịka n'asụsụ mmemme niile). Iji mee ka usoro nchịkọta dịkwuo mfe, ngwá ọrụ ọhụrụ pụtara, onye kachasị nnọchite anya ha niile bụ iwu ahụ -eme ka.
Make were faịlị Makefile dị ka mmalite ma na-achịkọta ihe dị mkpa iji mepụta nke ikpeazụ a na-eme, na ụfọdụ usoro a chọrọ ịme faịlụ a na-akpọ configure iji nwee ike ikenye mgbanwe ole na ole dị mkpa maka nchịkọta ahụ iji chịkọta (gbaghara redundancy) faịlụ bara uru.
Nke a bụ ihe kpatara n'ọtụtụ nkuzi anyị ga - achọta usoro ndị a:
Anwansi nke ./configure:
Iji gosi gị otu ihe nzuzo zoro ezo ma na-atọ ụtọ nke koodu isi mmalite, anyị ga-aga koodu isi nke mmemme anyị niile maara nke ọma, sudo. Mbụ nzọụkwụ ndị mbụ, mana m ga-akwụsị na ./configure iji gosi ha ihe puru iche.
Nke a ga-alaghachi a ogologo ndepụta nhọrọ, otu nke m ga-egosi gị nke kachasị na-adọrọ uche m.
--with-insults... dị ka aha ya pụtara, na-edekọta sudo na mmegbu Bụ ihe na-atọ ọchị nke na-enye gị ohere iziga mkparị na onye ọrụ oge ọ bụla ha mehiere na paswọọdụ ha. Gịnị ka ọ bụ? Ọfọn, na-adịbeghị anya 😛 ma na-eme ka a doo anya. Enwere ọtụtụ puku nhọrọ anaghị abịa na ndabara na ọtụtụ nkesa.
Dị ka ị dị, enwere ọtụtụ ndị ọzọ nwere ike ịdị na-arụ ọrụ na nkesa koodu ọnụọgụ abụọ na nke ị na-agaghị eji, ma ọ bụ na a ga-enwe ụfọdụ ịchọrọ, mana ha agaghị abịa na ọnụọgụ abụọ nke gọọmentị gị kesara, nke pụtara na mmelite ọ bụla ga-abụ ntuziaka.
Nweta obi ụtọ na Gentoo:
Anyị ahụworị ọtụtụ nhọrọ anyị nwere ike ịlafu ma ọ bụ dọrọ na mmemme izizi. Mana ugbu a, ka anyị lekwasị anya n ’nsogbu a chịkọtara.
You nwetụla mgbe ị na-eche ihe kpatara igwe ọhụụ ji dị ntakịrị ọsọ ma e jiri ya tụnyere ndị na-abụghị nke oge a? Ọ bụrụ na nhazi ahụ ka mma, enwekwu RAM, ihe niile ka mma, gịnị ma ị ga-aga ngwa ngwa? Azịza ya dị mfe ... mkpokọta.
Ka anyị were ezigbo ihe atụ.
A chịkọtara ihe omume m na nhọrọ ahụ --march=broadwell... nke a bụ n'ihi na onye nhazi m brọl (intel i7). Ndabere na nke a? onye nhazi ọ bụla tupu Broadwell enwe ike ịmata ọnụọgụ abụọ a. N'oge a ị kwesịrị ị na-ahụ ya nke ọma, ma ọ bụrụ na m na-anakọta na a –Mach a kapịrị ọnụ, ihe niile dị n'elu agaghị arụ ọrụ ... ya mere kedu ọnụọgụ ọnụọgụ abụọ si akwado ọtụtụ ụdị ngwaike? Dị mfe, ha na-agbakọta na opekempe enwere ike 🙂 nke a na-ekwe nkwa na ụdị ngwaike niile ga-enwe ike ịgụ ya (opekata mpe maka ndakọrịta).
Ezigbo nsogbu ... ma ọ bụrụ na ị na-eji mmemme a chịkọtara maka i3 ... Ike niile nke i7 gị (ma ọ bụ ụdị AMD ya) lara n'iyi !! Nke ahụ ọ bụghị mwute? 🙁
Ebe ọ bụ na ndị mmepe Gentoo mara ihe nke ọma, usoro a dum nke tar, ./configure, make, wdg ... ejiriwo ike nke dochie ya Ọdụ ụgbọ mmiri. A kpọgharịrị aha nhazi ndị a niile eji USE flags, yabụ ọ bụrụ na ịchọrọ nhazi a kapịrị ọnụ, ịkwesighi itinye koodu isi, naanị hazie mgbanwe ahụ. Nke a bụ ihe atụ nke otu esi eme ya na sudo na portage. Mbụ anyị ga-ahụ ihe nhọrọ anyị nwere na anyị ugbu a nhazi na ajụjụ.
Dịka anyị pụrụ ịhụ, nhọrọ ndị na-acha uhie uhie na-arụ ọrụ, ndị na-acha anụnụ anụnụ adịghị, nke ọma ... onye ọ bụla nwere ike ịgụ akụkọ akụkọ 🙂
ka anyi kwuo na achọrọ m itinye nhọrọ ...
Dị mfe dị ka ịgbakwunye ahịrị na faịlụ akpọrọ sudo (aha a na-akpọ ya) n'ime /etc/portage/package.use/. Na nke a, oge ọzọ anyị wụnye sudo ọ ga-agwa anyị na a ga-emegharị ya na nhọrọ arụ ọrụ.
Ọ bụrụ na anyị enye, EE, ihe niile ị ga - eme bụ ichere ntakịrị na voila 🙂 dị mfe dịka nke a.
Ọfọn, anyị ahụlarị otu ọ dị mfe iji rụọ ọrụ ndị ọzọ na Gentoo, nke na-enye anyị ohere ịgbakwunye, wepu ma ọ bụ gbanwee nhọrọ n'ime mmemme kachasị amasị anyị. Anyị ahụlakwa etu arụmọrụ nke mmemme anyị si dabere nke ukwuu na ndị ngbanwe nke anyị ji achịkọta ya. Ọ bụrụ n’inwere igwe ọhụrụ, Gentoo bụ nhọrọ kachasị mma gị. Ọ bụrụ na ịnwe igwe ochie, Gentoo bụkwa nhọrọ gị (ọ bụ ezie na ọ na - ewe oge iji chịkọta, mmemme ikpeazụ ga - adị mfe).
Aga m ede ntuziaka m nwụnye Gentoo n'oge na-adịghị anya, maka ndị hụrụ SystemD na ndị njem OpenRC (M na-eji sistemu na GNOME) Site n'ụzọ, nnukwu uru ọzọ dị na Gentoo bụ ikike họrọ ihe niile dị n’ime sistemụ gị, na mgbe m kwuru ihe niile dị Ihe niile.
Y’oburu n’acho ihe mbu m, nke a bu njikọ ya:
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkesa » Gentoo: Gini mere m jiri chiko ihe nkem?
Akwa! Aga m na-eche maka Gentoo na Gnome ntuziaka nwụnye. Enwere ike a gbara m ume ịkwaga na Gentoo ọbụlagodi na m ka nwere PC ochie (intel core i5 3rd gen.). Cheers!
N'oge na-adịghị anya, Mart ganó meriri m ịkọrọ ọtụtụ ihe, yabụ edepụtara m akwụkwọ ọzọ na-eche ka ebipụta ya, mana n'oge na-adịghị anya 🙂 M kwere nkwa
Echere m na m ga-amalite ịhụ ọtụtụ ederede gburugburu ebe a banyere nkesa Linux kachasị amasị m o!!
Anọ m na Gentoo kemgbe 2005 ebe m jiri ya guzobe Mail Server na mahadum ebe m gụrụ akwụkwọ (yana ebe m na-arụ ọrụ ugbu a) yana agbanyeghị na m ataala ahụhụ mwakpo oge ụfọdụ, ana m alaghachi na Gertroodis m hụrụ n'anya (nke mbụ na Gnome2, mgbe ahụ Xfce na igbe mbata) , na ka ị na-aza ajụjụ na post gị gara aga, na-arịwanye elu nkà na ihe ọmụma iji dị mma-na-akụ ya 😉
A ga m eche onyinye gị ndị ọzọ, ekele na ekele maka ịme ụbọchị m = D!
Nke ozo, nke ozo abia 🙂 ọ di ka inwe mkparịta ụka mkparịta ụka banyere isiokwu m masịrị m, nke ọzọ ga-abịa n'oge na-adịghị anya, na nke na-esote, na nke na-esote 😛 Ana m ekele gị nke ukwuu maka okwu gị 🙂
Anọ m na-awụli elu n'etiti distros ruo ọtụtụ afọ, m nọ na-eche maka ịchịkọta m…. Ntuziaka ahụ ga-abụ nzọụkwụ nke m na-efu…. mgbe m ga eji ekpori egwu ya. Daalụ maka ihe niile ……
Ọfọn, akwụkwọ ntuziaka bụ paradaịs nke ozi, enwere naanị ihe niile 🙂 Enwere m ike inye onyinye m nke obere ájá 🙂 mana n'oge na-adịghị anya, akwụkwọ na-esote na-apụta, n'oge na-adịghịkwa anya otu ga-apụta (Ana m ahụrịrị na a na-atụ anya ya nke ọma) ~ Nzọụkwụ 20 nwụnye usoro. Ekele,
Kedu nwa nwoke ị na-enyeghị m oge m gafere site na mbido na-ekwu maka microprocessors dị iche iche na onye ndu bụ ebe a !!!!! Ọgwụgwụ nke m mebiri maka MBIR! !!! Nde ekele !!!!
Knoppix, Mandrake, Ubuntu na Debian ... Na mgbe niile na-eche maka Gentoo ...
Na-eche ndị 20 nzọụkwụ!
Hahaha ọma, ọ dị ka nrọ ọ bụghị ya? Asị m na ọ bụ oge iji mee ya 😉 ekele
Jụụ dị ka ice dijo
Ndewo ChrisADR, nke mbu achọrọ m ịgwa gị na ehibeghị m ụra nke ọma kemgbe isiokwu mbụ gị na Gentoo, ọ metụtara isiokwu ọhụrụ a, nrọ m dabere na ikpokọta Gentoo na akwụkwọ ochie m Aspire One Netbook. Na nrọ m sistemụ agwa m na netwọkụ m emeela ochie nke na ọ naghị amata ngwaike.
N'aka nke ọzọ, ozugbo m hụrụ Gentoo ọ dọtara uche m, ha kwuru ikike ọ na-enye kọmputa (kọmputa). Kemgbe ụbọchị ahụ, agwara m onwe m na otu ụbọchị m ga-etinye ya, ihe karịrị afọ 10 agafeela ma emeghị m ya, ikekwe n'ihi na ha gwara m na ọ siri ike ịwụnye ya, n'oge ahụ ọ fọrọ nke nta ka m bụrụ listi linux nke mere ha ji mee ka iwe m karịa ya. Otú ọ dị ọchịchọ ịmata ahụ gara n'ihu. Otu oge m gbalịrị ịwụnye BSD na netbook m n'enweghị ihe ịga nke ọma, a gwara m na Gentoo dị ka linux dịka BSD.
Kedu ihe ị kwadoro m iji wụnye Gentoo na nke ochie m Aspire One na ochie Atom compiler?
na-ekele gị nke ukwuu maka isiokwu gị Ana m echere ihe ndị ọzọ
Zaghachi ka ọ dị jụụ dị ka Ice
Mma, m nwere ike ikwu na ị… Mee IT! n'ikpeazụ, ọ bụrụ n'ikpeazụ ọ ga-ada (nke m na-enyo enyo nke ukwuu n'ihi na kernel ka emere iji kwado ụdị ngwaike ọ bụla) ị ga-enweworị ahụmịhe bara ụba na ụwa Linux 🙂 ị chịkọtara kernel gị, ị ga-etinyeworị faịlụ faịlụ gị site na ncha, ị ga - eme nhazi nke ole na ole na - eme na ndụ ha 🙂 ọ ga - enye gị ọhụụ ọhụụ nke ụwa hahaha Ọ bụrụ na ịnweghị ike ihu profaịlụ Unix & StackExchange m answers azịza m na-ekpuchi ọtụtụ linux enwere n'ihi na ịmara Gentoo mere ka m mụta ọtụtụ ihe gbasara Linux niile Ana m ahapuru gi njiko nke profaịlụ m ebe a
Atụla egwu, na n'ikpeazụ, ọ bụrụ na ihe niile na-aga nke ọma (ọ ga-efu ntakịrị) ọ ga-abụ mmezu maka akwụkwọ gị reet Ekele
Ana m echekwa ịkwaga na Gentoo, mana enwere m obi abụọ. Nke mbu, olee otu ihe ngwugwu si rute Arch? N'aka nke ọzọ, laptọọpụ m nwere batrị etinyere n'ime ya, anyị niile makwaara ihe oke oke ọkụ na-aga n'ihu na batrị. Ma ebe ọ bụ na m ga-eji ọtụtụ oge chịkọta ...
Ọ dị mma, eziokwu enweghị ike ịgwa gị n'ezie nke ọzọ bụ Rolling Release 😛 ihe m nwere ike ịgwa gị nke ọma bụ na Gentoo nwere alaka abụọ: "ụlọ anụ" na "adịghị akwụsi ike", ọ bụ ezie na "anaghị akwụsi ike" kwesịrị inwe ọtụtụ ọnụ ọgụgụ nchịkọta na njedebe nke teknụzụ, enwere m ọtụtụ ndị mmepe ama ama na-eji ya ụbọchị ha kwa ụbọchị na-enweghị nsogbu. A na-eme ọtụtụ n'ime ndị a ka ha rụọ ọrụ na ebe nchekwa nke ọrụ ahụ, yabụ na ọ nweghị ihe dị ugbu a. 🙂 M na-eji ngalaba "anụ", mana nke a bụ n'ihi ọrụ m n'ime obodo dịka onye nhazi nchekwa na dịka onye otu ule otu ule (Arch Tester). Ọ bụrụ na ịnweghị ụdị nke "kwụsiri ike" maka ọrụ ahụ, ị ​​ga-anọrịrị na nsọtụ teknụzụ na "enweghị ụlọ."
Amaghị m ma ọ zara ajụjụ gị, mana ọ dịkarịa ala, enwere m olileanya na ọ ga-adọrọ uche gị iji gbalịa ya 😛
Nke bụ eziokwu bụ na ị na-eme m chọrọ 😉
Enwere m mmasị na ihe ị gosipụtara banyere nkuzi C, yana Python na m ga-enwe ekele ma ọ bụrụ na ị nwere ọla ọ bụla zoro ezo maka nne na nna ochie.
Maka itinye gị ụfọdụ osisi na nkwanye ùgwù m niile ebe m chere na ọdịnaya dị mkpa karịa kọntinent ahụ, mana otu m si eji asụsụ ahụ amata m ga-ekwu maka obere ihe.
Say na-ekwu na mbido:
"Mkpokọta bụ usoro onye na-eme nchịkọta na-arụ iji koodu edere n'asụsụ mmadụ wee gbanwee ya ka ọ bụrụ koodu enwere ike ịgụta igwe."
N'uche m, ọ bụghị ihe ziri ezi itinye ihe akọwapụtara na nkọwa ya, ebe ọ bụ na ịkọwapụta mkpokọta ị gụnyere okwu nchịkọta, yabụ ihe dị ka nke a gaara adịtụ mma karịa:
Nchịkọta bụ usoro ihe omume na-enweta site na faịlụ ederede edere n'asụsụ (C, C ++) faịlụ nwere ike iji kọmputa rụọ.
Onyinye gị dị ka ọ dị m mma, a na m anabata ya iji nwaa idebe ya na isi ya wee gbakwunye ozi ahụ 😉 daalụ.
Ugboro abụọ D. dijo
M na-eji ubuntu 16.04, ị chere na m kwesịrị ịgbanwee gaa gentoo? Kedu ihe ga-abụ uru nke gentoo na ubuntu?
Ọfọn, amaghị m n'ezie 😛 ọ dabere n'ihe ị ga-eji akụrụngwa gị, ma ọ bụ akụrụngwa ị nwere, ma ọ bụ ọ bụrụ na ịnwere oge (na ọchịchọ) iji mụta otu esi eji Gentoo. M ga-agwa gị na ọ bụrụ na ị nwere oge, ma ịchọrọ, ị nwere ike ịga n'ihu! ị ga-ahụ na ị ga-amụta ọtụtụ ihe n'ụzọ 😉
Ọ bụrụ na eziokwu bụ na gentoo nwere ọtụtụ ihe ị ga-agụ, dịka ọmụmaatụ ị na-eme ngwugwu iputa -pv na ị na-eji ihe na-acha uhie uhie, acha anụnụ anụnụ na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, yana mkpọchi ndị nwere ike ịchọ mgbanwe nke ojiji, nchịkọta unmask, mgbanwe oghere dị iche na ndi oru ngwugwu ndi ozo gosiputara.
Echere m na a ga-emelite gentoo kwa ụbọchị, ọ bụrụ na ịhapụ ya maka ọnwa 1 ọ ga-adị mkpa iji chọpụta otu esi edozi ya.
Ee, hehe, na mbụ ọ na-amị ntakịrị 🙂 mana ka oge na-aga ị maara nke ọma na ị ga-erute isi na-eche echiche ihe kpatara na enweghị ndị njikwa ngwugwu ọzọ ị nwere mgbanwe dị ukwuu 🙂 n'ihe gbasara oge, amaara m ndị nwere otu sava ahụ na-agba ọsọ ọtụtụ afọ na-enweghị imelite ma na-adịgide kpamkpam dị ka ụbọchị mbụ, yana maka ndị nọrọ ebe ahụ ọtụtụ afọ (ọ bụghị ọnwa) enwere ngalaba pụrụ iche nke wiki na-akọwa ihe ngwọta dị na nsogbu a:
N'ihe banyere mmelite, enwere ike ịhụ nsogbu nchekwa ozugbo emeela ka m were echiche ọhụrụ, mana imelite kwa ụbọchị bụ ihe n'agbanyeghị agbanyeghị nkesa a ga-eme, ọ naghị ewekarị iwu abụọ na nkesa niile. , na gentoo na mgbakwunye na ịmepụta ezigbo agwa, zere ogologo echere mgbe nchịkọta niile na-agbakọ.
Na ọnụọgụ abụọ, m na-eji manjaro na tupu m jiri ubuntu, ọ dị mfe imelite, ana m enyocha kwa ụbọchị ma ọ bụrụ na enwere mmelite, ọ bụ ihe mbụ m lere anya, mana na mmelite manjaro enyebeghị m nsogbu ndị dị mkpa, ana m agwakarị pacman na ee nye ihe niile ma nwekwaa imelite ntinye aka ma ọ bụ hichapụ faịlụ. Mana site na ihe m gụrụ na gentoo, okwu ụfọdụ na-esiri m ike nghọta mgbe ụfọdụ.
Gwa ee na ihe niile fernan adighi nma 🙂 oburu na iru GNU / Linux I kwesiri ima ma ghota ya. Ọfọn, ọ dịghị ihe ị ga-ahụ, ọ bụ naanị omenala, oge na-aga ị ghọtara na ọbara ọbara bụ ihe ị nwere, acha anụnụ anụnụ ihe ị na-eme, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ihe ị ga-agbakwunye na nke ahụ bụ :). Agaghị m agbanwe ihe ọ bụla iji melite ma ọ bụrụ na ahazi m nke ọma ịmalite, oge ụfọdụ m na-agbakwunye ma ọ bụ wepu ọkọlọtọ USE, mana ihe nkịtị bụ inye Ee nke ee mgbe m gụsịrị ndepụta iji mara ihe a na-eme done
PS: pacman -Syy bụ otu ihe na-apụta -sync
Pacman -Suy bụ otu ihe ahụ dị ka iputa -uD @world (the -av bụ naanị okwu ọnụ na ọ na-ajụ gị tupu ịga n'ihu, nke na-enweghị isi ma ọ bụrụ na ịmara ndị otu gị ma ị maara ihe ị na-eme, mana m tinyere ya iji zere nsogbu mgbe e mesịrị I) Ahụghị m na ọ siri ike icheta 🙂
Magburu onwe gị isiokwu, ma na aga na nke a. Enwere m obi abụọ na ọ bụ ọsọ ole ị nwetara n'etiti Arch ma ọ bụ Manjaro na Gentoo. N'agbanyeghị nhazi na mmụta na ya n'onwe ya, ọ na-eme ka ọ baa uru.
Ajụjụ ọzọ m nwere bụ etu m ga-esi mesoo ndị ọkwọ ụgbọ ala, nke a bụ ihe nyere m nsogbu na Arch.
Zaghachi Mauricio López
Ọfọn, m na-akwụsịtụbeghị benchmark n'etiti abụọ, na eziokwu na ọ bụ a nnọọ edochaghị ajụjụ, dabere na software ị na-eji, na akụrụngwa ị nwere, nke a nwere ike ịdị iche site na obere ma ọ bụ ihe ọ bụla na otutu. Ma ọ dịkarịa ala maka taa sistemụ abụọ ahụ na-arụ ọrụ nke ọma maka ihe m kwesịrị iji ha. (Enwere m isi Gentoo na Arch nke m na-eji site n'oge ruo n'oge) Nọmalị m na-eji ya eme ihe na mmezi mmemme (mana ọ na-abụkarị site na njedebe ka ọ ghara iji ọtụtụ nchekwa na IDE. Chrome na-akwado m n'ụzọ dị jụụ karịa 40 taabụ) (Agbalịrị m oge ahụ na ugboro ugboro, ọ bụ ezie na n'ozuzu m nwere naanị 5 kachasị maka ogologo oge.
Ọ bụrụ na otu ụbọchị ị nwaa anwa ịnwa, gwa m otu o si gaa 🙂
Banyere ndị ọkwọ ụgbọ ala, ebe ọ bụ na ị na-achịkwa kernel na uche gị, ọ dịkarịsịrị ọtụtụ n'ime ndị ọkwọ ụgbọala "nkịtị" nwere ike itinye, ma ọ bụ na ọ nweghị ihe ọzọ. N'ihe banyere ngwaike pụrụ iche (ọkachasị nke dakọtara na Linux n'ozuzu ya), echere m na ọ bụ otu ọrụ dị ka ọtụtụ distros ndị ọzọ, enweghị m akụrụngwa ọkachamara pụrụ iche ka m wee ghara ikwu ọtụtụ ihe na ya 🙂
Ekele na ihu ọma
Gini bu netwọkụ mmekọrịta gị ChirsADR?
Zaghachi Jeanpier Subero